Nagu saabsan - Hebei Moyo Technologies Co., Ltd.
TAB Dabaqa wuxuu ku yaalaa Aagga Horumarinta Dhaqaalaha iyo Teknolojiyadda ee Shijiazhuang, Gobolka Hebei, Shiinaha, oo ku yaal wareegga horumarinta dhaqaalaha Beijing-Tianjin-Hebei, oo ku dhegan Waddada-Beijing-Guangzhou Expressway, Tianjin Port, iyo Shijiazhuang Airport. Jawiga juquraafi ahaan wuu ka sareeyaa gaadiidkuna aad buu ugu habboon yahay.
Shirkaddu waxay hirgelisaa is -dhexgalka warshadaha iyo ganacsiga, waxayna soo saartaa sagxadda SPC ilaa 2014. Waxay isku daraysaa horumarka, cilmi -baarista, wax -soo -saarka iyo iibinta dhulka SPC. Warshadu waxay dabooshaa aag 70,000 mitir murabac ah, oo leh 3 si buuxda otomaatig u ah khadadka wax soo saarka ee Jarmalka laga soo dhoofiyay, oo qiimihiisu yahay wax soo saarka sanadlaha ah 3.24 milyan oo mitir oo laba jibbaaran. Badeecadaha waxaa loo dhoofiyaa in ka badan 40 dal oo ku yaal Bariga Yurub, Mareykanka, Bariga Dhexe, Koonfurta Ameerika, iyo Koonfur Bari Aasiya.
Marka la eego tayada alaabada, shirkadu waxay leedahay ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, shahaadada kaynta FSC, kormeerka dhinac saddexaad ee waxyaabaha formaldehyde iyo shahaadooyin kale. Awoodaha farsamada sare ee shirkadu waxay si adag u xakameeyaan xidhiidhka ka dhexeeya alaabta ceeriin ilaa badeecadaha la dhammeeyey, waxayna gaaraan badeecooyin tayo sare leh oo hormuud u ah, Hirgelinta istiraatiijiyadda astaanta.
Shirkaddu waxay u hoggaansantaa mabaadi'da ah "u hoggaansanaanta maareynta heerka koowaad, soo saar alaabada heerka koowaad ah, oo bixisa adeegyo heerka koowaad ah", u hoggaansan waddada barashada, horumarka iyo hal-abuurka, la soco isbeddellada warshadaha gudaha iyo dibadda, had iyo jeer la soco horumarka teknolojiyadda caalamiga ah, si joogto ah u hagaaji tayada alaabta, iyo cusbooneysii fikradaha naqshadeynta. Hagaajinta nidaamka adeegga, ku dadaal dhammaystirka iyo dhammaystirka.
Shirkaddu waxay diiradda saareysaa horumarinta sagxadda dhagaxa ah ee Shiinaha, oo leh aragti hore loo eegayo, aragti caalami ah, iyo mabda'a macaamilka marka hore, si firfircoon kor loogu qaadayo horumarinta warshadaha sagxadda Shiinaha, iyo inay gacanteeda ku biiriso dib-u-noolaynta qaranka Shiinaha noocyada warshadaha.
Laga soo bilaabo 2020, sababtuna tahay COVID-19, si si wanaagsan loogu adeego macaamiisha loona anfaco horumarkooda ganacsi, waxaan sidoo kale ku talin karnaa soo-saareyaasha amaahda alaabada laxiriira macaamiisha.
1. Soo saaraha barafka
2. Soo -saarayaasha gidaarka gidaarka ee PVC
3. Warshadda Xayndaabka Mesh
4, Warshadda Mashiinka Goynta Vinyl
Isla mar ahaantaana, si loo waafajiyo alaabada fudud iyo kuwa culus, waxaan sidoo kale macaamiisha kula talineynaa qaar ka mid ah darbiyada jikada 3D, maxaa yeelay dabaqa ayaa aad u culus, kaasoo sababi doona qashin badan oo ku jira weelka. Haddii lagu daabuli karo gidaarka 3D, waxay si wax ku ool ah u adeegsan kartaa booska weelka oo ay kaydin kartaa kharashyada.
Ku soo dhowow macaamiisha dhammaan waddamada adduunka si ay uga gorgortamaan ganacsiga. Waxaan u adeegsan doonnaa dabeecadda shaqada ugu dhow, hufan oo macquul ah si aan macaamiisha uga caawino inay si firfircoon u ballaariyaan una horumariyaan ganacsigooda si loo hubiyo sare u qaadista faa'iidooyinka macmiilka.